सिभिल बैङ्कको मङ्सिर २२ बाट १०ः४ हकप्रद शेयर निष्कासन | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिभिल बैङ्कको मङ्सिर २२ बाट १०ः४ हकप्रद शेयर निष्कासन
सिभिल बैङ्कको मङ्सिर २२ बाट १०ः४ हकप्रद शेयर निष्कासन
मङ्सिर ६, काठमाडौं (अस) । सिभिल बैङ्क लिमिटेडले १० बराबर ४ (१०ः४) अनुपातमा मङ्सिर २२ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्म हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीको शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अङ्कित दरको २ करोड ७ लाख ४० हजार ८ सय ८६ दशमलव ७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । दोस्रो बजारमा मङ्गलवार रू. १ सय ९१ मा कारोबार भइरहेको कम्पनीको हकप्रद शेयर प्रतिकित्ता रू. १ सय अङ्कित दरमा खरीद गर्न पाइने छ ।
बैङ्कको मङ्सिर ४ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरुले हकप्रद शेयरमा खरीदको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर खरीदका लागि बैङ्कको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र सिभिल बैङ्कको सम्पूर्ण शाखामा आवेदन दिन सकिन्छ ।
हकप्रद शेयर निष्कासन पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख १० हजार ३ सय ६२ पुग्नेछ । बैङ्कले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ११ करोड ३३ लाख ६९ हजार नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ८ गुणा बढी हो । यो त्रैमासमा बैङ्कले १८ गुणा बढी खराब कर्जा संकलन गरेकाले नाफा बढ्नमा सहयोग मिलेको हो । बैङ्कले रू. ३१ करोड ४५ लाख ९ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको छ ।
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १६:२८
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १३:२३